Ngamunye wethu empilweni ebhekene nezinkinga. Ngokuvame ukwanda, izimpande zenzeka emilenzeni. Uma umuntu enempilo, ama-cramps ajwayelekile kakhulu. Kodwa kungaba kanjani labo abahlupheka njalo emilenzeni? Sizozama ukuqonda ukuthi kungani kukhona ukuxubana nokuthi yiziphi izindlela ezikhona zokwelashwa kwazo. Ukudumala kungabangela izifo ezivamile. Isibonelo, uma umuntu evame ukugoba imilenze, ukukhungatheka, ukucindezeleka, ukukhathala, kuthinta nokuntuleka kwamavithamini emzimbeni. Ngokuvamile, izigubhu zenzeka ephusheni.
Uma ufuna ukususa ama-cramps emilenzeni yakho, khona-ke kudingeka uhlale phansi futhi ngesikhathi esisodwa uphonsa imilenze yakho phansi futhi uphonse izikhathi ezimbalwa ngemuva kwendawo enomsindo. Ngemuva kwalokhu, kuyadingeka ukusikhipha indawo enhle. Emva kwalokhu, kunconywa ukuba ulale embhedeni uphakamise imilenze yakho ngaphezu kwakho. Udinga ukwenza lokhu ukuze ama-cramps angakukhathazi. Ukuxuba ukuphazamiseka uphazamiseka kancane ngangokunokwenzeka, udinga ukudla kahle. Ukuntuleka kwamavithamini kuhle kakhulu ekubukeni kokugubha. Yidla imifino, izithelo, imikhiqizo yobisi.
Yini okufanele ngiyenze ukuze ngizigweme ukuwayeka?
Kunezivivinyo eziningi ezilula zalokhu. Bayosiza ekugwemeni ama-cramps. Yima ezinzwaneni zakho, bese ugoqa izinzwane zakho. Kulesi sikhundla, yimani imizuzwana embalwa
Izinduku kufanele ziwele, bese uvala imizuzu embalwa, futhi uguqule ngezikhathi ezithile imilenze yakho, ukusuka komunye kuya komunye.
Khuphula izinzwane zesithende ngenkathi lokhu kufanele kukhishwe phansi. Bese ushona phansi. Kutuswa ukuba wenze njalo izikhathi ezingu-15.
Uma uhlushwa amagagasi amaningi emilenzeni yakho, ke lezi zeluleko zizokusiza kuwe.
Kabili ngosuku udinga ukusula izinyawo zakho ngejamu lemon. Vumela izinyawo zakho ukuba zome, futhi ngemva kwalokho ungagqoka izicathulo. Lokhu kufanele kwenziwe ngaphakathi kwamasonto amathathu.
Ukusuka ekuguleni, amafutha bay bayasiza ngokuphelele. Ukuze senze lokhu, sidinga ama-gramu angama-60 amaqabunga ama-bay, ngakho-ke kumele aphethwe kahle futhi athululelwe ngamafutha omquba, 200 ml. Yonke into ehlanganisiwe, bese uthele emgodini weglasi, okumele uvalwe futhi ufake endaweni epholile amaviki amabili. Uma isisombululo sesilungile, siphume futhi ungasebenzisa ngokuphepha le mafutha ukuze uhlile izinyawo zakho.
Ngama-cramps, thatha induku eyindilinga, mhlawumbe kuze kube ngu-35 cm ubude. Futhi usebenzise le nduku izikhathi ezimbalwa ngosuku, vele usebenze kuze kube yizinyosi eziyikhulu ezinzwaneni zakho. Lokhu kuzosiza ukuqeda ama-cramps.
Ungasebenzisa i-celitine nectar. Thatha i-nectar encane, khona-ke kufanele ifakwe i-petroleum jelly. Amafutha okushisa nsuku zonke nokuhamba kwe-massage agubhe izandla, izinyawo. Kodwa kungcono ukugcoba lezo zindawo lapho ukuxubana kuvame ukuvela khona. Yenza le nqubo ebusuku, amasonto amabili.
Izindlela ezinokwethenjelwa zitholakala kumakhambi okugomela. Ziyisimangaliso nje. Sidinga i-thyme ne-yarrow. Thatha ama-gramu angu-20 we-thyme no-10 g we-yarrow, engeza 150 ml utshwala. Hlanganisa konke konke. Vumela ukuphuza amaviki amabili. Le tincture ingagcinwa isikhathi eside kakhulu, iyovumela ukwandisa nokuphumula imisipha emilenzeni.
Njengoba usuyazi kakade, ama-cramps abangelwa ukungabi namavithamini emzimbeni. Imvubelo ingasetshenziswa, bayosiza. Sizokulungisa isiphuzo emvubelo. Sizodinga ama-crackers, okumele athululelwe amanzi ashisayo bese evumela ukuba aphuze okungenani amahora amathathu, bese uyinkinga bese ufaka imvubelo. Vala isembozo ngokuqinile, futhi uvumele uhlale okungenani amahora ayisikhombisa. Thatha isiphuzo esinjalo udinga imizuzu eyi-10 ngaphambi kokudla ingilazi eyodwa ngosuku, amasonto amathathu.
Sebenzisa ithisipuni eyodwa ye-anyanisi ehlutshiwe, bese uwuthululela ngamanzi ashisayo, vumela ukuthi ufeze okungenani amaminithi angu-8. Thatha ngaphambi kokulala. Ukuzizwa ngeke kukukhathaze.
Ezingilazi ezimbili zamanzi ashisayo, engeza u-1 tbsp. isipuni se-chamomile. Phuza lokhu kuphuza izikhathi ezintathu ngosuku ngaphambi kokudla. Ungasebenzisa futhi amazambane abhakabhaka. Ngosuku olulandelayo, thatha omisiwe, 2 tbsp. isipuni, bese uthele ngamanzi ashisayo. Vumela ukuphuza bese usebenzisa ingilazi eyodwa ngosuku ngaphambi kokudla. Mayelana nama-cramp ungakhohlwa.
Ukwelapha izifo, ungasebenzisa futhi ama-horseradish, kokubili izimpande zawo namaqabunga awo. Esimweni sethu, sidinga izimpande zawo. Fine-finely usike horseradish ukwenza iphalishi. Bese ufaka ilitha lamafutha omnqumo noju. Konke ukuxuba futhi ufake endaweni yokugcina epholile. Ungasebenzisa imizuzu engu-15 ngaphambi kokudla izikhathi ezimbili ngosuku, isipuni esisodwa.
Ungakugwema kanjani ukuhlukunyezwa?
- Lahla isisindo esiningi;
- gqoka kuphela izicathulo ozikhululekile ngazo;
- Yenza okugeza nokucindezela izinyawo. Ungasebenzisa isinaphi ngalokhu.
- Yenza massage nsuku zonke.
Kungani ikhanda lami lilimaza?
Qinisekisa ukukhukhumezeka ngezindlela ezithandwayo
Ingabe ukuphelela kuyigugu noma isizathu esikulo mkhuba?
Indlela yokwenza itiye ye-herbal kusuka ezitshalweni zokwelapha?
Ukwelashwa okungapheli komuntu izikhambi
Indlela yokukhipha ukucasula, izikhambi zabantu
Ukwelashwa komuntu we-influenza, ukukhwehlela, umphimbo, impumulo, i-bronchitis
I-Point Head Massage
I-manicure enobuthi obuhlaza futhi obomvu obubili obuyi-fashion ehlobo kule ehlobo!
Indlela yokuthola isisindo ngamaphikishi adumile
Indlela yokugqoka ingubo nge-neckline ngemuva?
Amaqanda agcwele inyama yesikhumba
U-Sati Casanova kubhalisile abesaba amanzi abesabekayo
Ukuthuthukiswa ngokomzimba kwengane eseyingane, ukukhula kwasekuqaleni kanye nesikhathi seminyaka yasenkulisa
Amaladi alula nsuku zonke
Isicelo sika-Aronia Aronia
Ama-bhisikidi anebhokisi le-peanut noju
Isaladi yemifino ngamafutha omsedari
Amakhambi omphakathi ngezindawo ezibomvu ngemuva kwe-acne
Izakhiwo eziwusizo zobhiya
Izimpawu kanye nokudla okunempilo ku-hypothyroidism
Ulimi lomzimba, ukuthi ungabheka kanjani ukuzethemba